Programmer's Diary: Our Anniversary
၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော့်ဘ၀လက်တွဲဖော် စကားပန်းလေး ပိုးနဲ့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာ ဆိုတော့ ဒီနေ့ တစ်နှစ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့ပဲ။
၁ နှစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘာမှ မကြာလိုက်သလိုပဲ။ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် မိန်းမ ရကုန်ကြပြီ။ အသက်တွေ မငယ်တော့ဘူးဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ နေချင်တော့တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်ပြန်နေရအောင်ကလည်း... ။ လောလောဆယ်တော့ စင်္ကာပူရဲ့ အပူအပင်များတဲ့ ဘ၀တွေထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်သေးဘူး။ စင်္ကာပူကို ကိုယ့်နောက်မှ ရောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဒီကနေ ခွာကုန်ကြပြီ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စင်္ကာပူမှာ ဘယ်လောက် stress များများ ဘေးနားကနေ အားပေးတတ် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ကြင်သူသက်ထားရှိနေလို့ တော်ပါသေးတယ်။ တာရာမင်းဝေကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲကလို "တကယ်တော့ မြို့ပျက်ကြီး တစ်ခုပါပဲ .. ဒါပေမယ့် ဗျတ်စောင်းလေး တစ်လက်ရှိလို့ ကိုယ်ချိုမိတယ်" တဲ့။
မနှစ်က ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးကို ပြန်ဖတ်ပြီး အချိန် ၁ နှစ်လောက် ခဏ နောက်ပြန်သွားမိတယ်။
(ဒါကတော့ ဓာတ်ပုံ-ဇင်ကိုလတ်ရဲ့ လက်ရာကို picasa နဲ့ နည်းနည်း ပြင်ထားတဲ့ပုံပါ)
ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး စွပ်ပေးမယ့်ပန်းကုံးမှ မဟုတ်ဘူး
ဟိုကတော်ကြီး စွပ်ပေးမယ့် လက်စွပ်မှ မဟုတ်ဘူး
ဟို ခမ်းခမ်းနားနား ..
ဘ၀နှစ်ခု တစ်ခုထဲ ထပ်လိုက်တာ
အသက်ရှူသံ တစ်ခုထဲ ထွက်တော့တာ
ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးကြခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:21 PM
တသက်လုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘ၀ခရီးကို အတူလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
ဘဝခရီးကို ဆုံးခန်းတိုင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့..
အတန်းထဲမှာ ညီညီနဲ့ အရမ်းကိုဆင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်တွေ့ထားတယ်။ ဆံပင်ကောက်နေတာကအစ တူတာ.. ကြုံရင်ပုံရိုက်ပြီး ပို့လိုက်မယ် :)
November 29, 2008 9:14 AM
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘ၀တခုကို ထူထောင်နိုင်ပါစေ။
ယနေ့မှ စ ..
November 29, 2008 12:01 PM
Wow.. time flies so fast. Alreadyayear?
Happy anniversity Nyi & Poe!
KNL, Ma Moe & LaMin
December 04, 2008 2:01 AM
မပန်.. ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပဲ။ ဂျီမတော့ခ် ဖြစ်တာ ကြာပြီ။
နိုင်းနိုင်း.. ဓာတ်ပုံစောင့်နေမယ်။ တပြည့်ရော ဆရာမပါ နှစ်ယောက်တွဲပုံ ပို့လိုက်ပါလား။
MrDBA.. စာနာမှုနဲ့ ဖေးကူမလား.. ဒီမြေပေါ်အတူကြီးပြင်း တို့သွေးရင်းပါ.. လက်ကမ်းလို့ ကြိုပါ.. အကြင်နာတွေနဲ့ ဖေးကူပါ..
ကိုပေါ.. ခုလို ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးဗျို့။
မခင်မင်းဇော်.. အဆိုတော် နွဲ့ယဉ်ဝင်းနဲ့ မှားလောက်တယ်။ ဒါတောင် အသံမကြားရသေးလို့ :)
KNL & Ma Moe.. Gosh, i'm almost 30!
မအိမ့်ချမ်းမြေ့.. thank you for the wish.
ရှေ့လျှောက် အကြာကြီး အချိန်ကာလတွေ ချိုပါစေ...။
Ko Nyi Nyi found the truth now....
ka ma pal...thu thi thor p
ကိုညီညီ့ ကြည့်ရတာ တောင့်တောင့် ကြီ:
ဧကံန ဒတ်ပုံ စရာ ညံ့ လို့ ထင်တယ်
(ဟဲဟဲ အချွန်နဲ့ မလိုက်ပြီ။)